Arsenal oo laba xiddig ka dooneysa Real Madrid, maxaa ka cusub Bruno Fernandes & wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iisbiga ciyaartoyda. – Gool FM
Arsenal oo laba xiddig ka dooneysa Real Madrid, maxaa ka cusub Bruno Fernandes & wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iisbiga ciyaartoyda.
Abdirashid Mohamud July 5, 2019
(Yurub) 22 Maajo 2019. Maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan, kusoo dhawaada xubinta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo taxane inoo ahaan doonta, waxaan idiin soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxaha qaaradda yurub.
Masuul kama noqon doono xaqiiqada iyo jiritaanka wararka aan hoos idinkugu soo gudbino maadaama aan u xaglin doono ilaha aan kasoo xiganay.
=> Manchester City ayaa isaga baxday loolankii ay ugu jirtay saxiixa Harry Maguire, taasna waxey fursad siineysaa Man United.
=> Barcelona ayaa madaxa Samuel Umititi duldhigtay adduun dhan 60 Malyan oo Pound, Arsenal & United ayaa xiiseynaya.
=> Arsenal ayaa lagu soo warramayaa iney dhigeeda Real Madrid kala hadleyso sidii ay ku heli laheyd Lucas Vazquez.
=> Juventus ayaa sare u qaaday dalabkii laga soo diiday oo ay ka gudbisay Matthijs de Ligt, qiimahii ay dalbatay Ajax wali ma aysan la kulmin.
=> Mustaqbalka Bruno Fernandes ayaa go’aan laga gaari doonaa ka hor Axadda, xiddigaan & wakiiladiisa waxey la heshiiyeen United, balse waxaa kaliya dhiman in lacagaha la isku qanciyo. Intaas waxaa sii dheer in maamulka Sporting ay doonayaan in wax walba lagu kala baxo ama lagu kala tago ka hor Axadda.
=> Real Madrid oo isbuuca soo socda ku dhawaaqeysa saxiixa Paul Pogba, OK Diario ayaa lagu qoray in xiddiga reer France uu Madridista noqon doono dhawaan.
=> Arsenal ayaa la xiriirtay Marcelo oo aan hubin booskiisa Santiago Bernabeu, tan iyo 2007 ayuu ku sugnaa caasimadda – balse imaatinka Mendy iyo inuu sii joogo Reguilon ayaa shaki weyn galisay. Lama oga sida uu xaalkiisa noqon doono, laakiin xiriirka ay Gunners sameysay faah-fahin badan lagama bixin.
=> Mike Phelan ayaa riixaya qorshaha ay Man United ugu dhaqaaqeyso Harry Maguire, shaqsigaan lasoo shaqeeyay Ferguson ayaa dareensan in Harry uu anfacaad badan u lahaan karo Red Devils.
=> Inter Milan ayaa hakisay qorshahii ay kula saxiixaneysay Romelu Lukaku, ma ahan wax qarsoon in Inter dooneyso balse horay u socod ma jiro.
Mustaqbalka Bruno Fernandes oo waqti loo qabtay & Red Devils oo loo sheegay xilliga ay ogaan doonto go'aanka ugu dambeeya.
RASMI: Kooxda Manchester United oo heshiisyo cusub ka saxiixatay labo ka mid ah xiddigaheeda